December 2015 ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
ဒီနေ.အဖမ်းခံထားရတဲ့ ဒို.နိုင်ငံ သားများ အချုပ်ခန်းရောက်နေပုံ (ရုပ်သံ)၊ပတ်စပိုစ်.ရှိရှိ၊မရှိရှိ အကုန်ဖမ်းတယ်။
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Wednesday, December 30, 2015 လက်ရှိထိုင်းသတင်း No comments
War War Zin Oo
ခွန်ပရာယွတ်တို.ထိုင်းစစ်အစိုးရ ယုတ်မာပြီ။ဒီနေ.အဖမ်းခံထားရတဲ့ ဒို.နိုင်ငံ
သားများ အချုပ်ခန်းရောက်နေပုံ (ရုပ်သံ)၊ပတ်စပိုစ်.ရှိရှိ၊မရှိရှိ အကုန်ဖမ်းတယ်။
ကော့တောင်အမှုကိစ္စကို ပြည်တွင်းက ဆန္ဒပြကန်.ကွက်မှုကြောင့် ထိုင်းရောက်
ဒို.နိုင်ငံသားများကို ပတ်စပိုစ်ရှိရှိ၊မရှိရှိ တွေ.သမျှ အကုန်ဖမ်းပြီး အချုပ်ခန်းထဲ
ထည့်လိုက်တယ်။ထိုင်းရဲတွေနှင့်ထိုင်းစစ်တပ်တွေ ပူးပေါင်းပြီး အခုလိုလိုက်
ဖမ်းဆီးနေတယ်လို. သိရတယ်။သူတို.လိုက်ဖမ်းတဲ့အချိန်မှာ ထွက်ပြေးရင်၊
အထုခံရမည်။ခြေထောက်နဲ.ကန်ခံရမည်။ကံဆိုးရင် သေနတ်နဲ.လည်း အပစ်
ဝင်စွပ်ဖက်လာတဲ့ကိစ္စကိုလည်း လူ.အခွင့်အရေးအဖွဲ.တွေ ဝေဖန်ပြောဆိုနေ
ကြပါသည်။ကျုပ်တို. ဗမာပြည်နဲ. အင်မတန်တူလာနေပါပြီ။
ထို.အတွက်ကြောင့်၊ကိုယ့်နိုင်ငံသားများ အသွားအလာ အားလုံးသတိထားကြ
Font Sytle ပါပြီးသား ဖုန်းအားလုံးကို မြန်မာစာ အလွယ်တကူထည့်ယူနိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲ-iFont(Expert of Fonts) v5.6.1 Apk
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Tuesday, December 29, 2015 Android, AndroidApplication, AndroidMyanmarFont No comments
iFont ဆိုရင် လူတိုင်းသိလောက်မှာပါ တကယ် perfect replacement font အမျိုအစားပါ ပြီးတော့ ဒီဆော့ဝဲ(Application) လေးဟာ Font Sytle ပါပြီးသား ဖုန်းအားလုံးကို မြန်မာစာ အလွယ်တကူထည့်ယူနိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲဖြစ်ပါတယ်။Android အတွက် သောင်းပေါင်းများစွာသော Font Apk တွေထဲမှာတော့ The best အဖြစ်ရပ်တည်နေတာပါ။ အထူးသဖြင့် ဒီဆော့ဝဲလေးဟာ Samsung ဖုန်းသမားတွေအတွက်Font Style ပါထားပြီးသား Galaxy ဖုန်းအားလုံးကိုရော့ပြီးတော့ Galaxy S3,S4,Note,Note II အထက် ဖုန်းအားလိုမြန်မာစာ လုံးဝအမှန်ထည့်ပေးနိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော Font Apk လေးဖြစ်ပါတယ်။အသုံးပြုလိုသူအတွက်ကတော့ ဖိုင် size ကတော့ 6.58MB ဖြစ်ပြီး Android ဖုန်း 2.3 အထက်ရှိဖုန်းသာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
♪ မိမိကိုယ်ပေါ်မှာ တက်တူးအမိုက်စားကြီးတွေထည့်နိုင်မယ့် - Tattoo MY Photo Maker v1.1 Apk (26-Dec) ♫
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Tuesday, December 29, 2015 Android, AndroidApplication No comments
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Application ကိုတော့ ပုံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ သိကြမယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ။ တက်တူးတွေ ကနှုတ်တွေ ထိုးတာဝါသနာပါသူများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ဒါမျိုး App: တစ်ခုတင်ပေးဖူးပါတယ်။ အခု တင်ပေးလိုက်တာက ပိုပြီး တက်တူးအရုပ်တွေ ပိုစုံပါတယ်။ မိမိရဲ့ ကိုယ်ခန္ခာပေါ်မှာ မိမိကြိုက်တဲ့ တက်တူးပုံတွေကို ရွေးချယ်ပြီး ဓါတ်ပုံထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ပါဝင်တဲ့ တက်တူးပုံတွေကတော့ တကယ့်ကို အလန်းစားကြီးတွေပါဗျာ။ အပြင်မှာတကယ်ထိုးချင်တယ်ဆိုလည်း ဘယ်လိုနေရာမှာထိုးရင် ပိုလှမလည်း ဆိုပြီး အခု Apk လေးနဲ့ အရင်ထိုးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးမှ Photo ထုတ်ပြီး ဆိုင်မှာသွားထိုးပေါ့ ဗျာ။ အပျော်ဓါတ်ပုံထုတ်ချင်တွေအတွက်လည်း အရမ်းမိုက်ပါတယ်။ Android OS 2.3.3 နှင့်အထက်ဖုန်း များမှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Tuesday, December 29, 2015 လက်ရှိထိုင်းသတင်း No comments
Video Link https://www.facebook.com/mtftv/videos/1512125572417327/
ข่าวสั้น MTF on air 28/12/2015
สภาทนายความไทย นัดเจอญาติจำเลยคดีเกาะเต่า 30ธ.ค.
""""""" နှာခေါင်းနှင့် မျက်နှာတွေကို သဘာဝလှပအောင် ပြုပြင်လိုပါက
Goodwill Clinic ဆေးခန်းမှ အထူးလျှော့ဈေး ဖုန်း 062-643-7078 """""""
ထိုင်းရှေ့နေများကောင်စီမှ ဒီဇင်ဘာ ၂၆ရက်နေ့ ၂၀၁၅ခုနှစ်ရက်စွဲဖြင့် စာအမှတ် ၁/၂၅၅၈ စာတစ်စောင် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာကတော့ ထိုင်းတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာကို မြန်မာပြည်သူများသိရှိနားလည်ရန် ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း လို့ရေးသားထားပါတယ်။
အဓိကအကြောင်းအရာကောက်နုတ်ရမယ်ဆိုရင် အလိပ်ကျွန်းအမှု သေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာကို အခြေခံတရားရုံးမှ ချမှတ်
ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် ချမှတ်မှုအမိန့်ကို အတည်မဟုတ်သေးဘူး။ လက်ရှိလိပ်ကျွန်းအမှုကို တရားစီရင်ရာမှာ တရားမျှတမှုတရားရုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ တရားမျှတမှုတရားရုံးဟာ ၃ဆင့်ခွဲခြားထားပါတယ် ၎င်းတို့မှာ အခြေခံတရားရုံး အယူခံတရားရုံး နှင့်အဆင့်မြင့်တရားရုံးတို့ဖြစ်ပါတယ်။ ယ္ခုသေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဟာ အခြေခံတရားရုံးမျှသာဖြစ်သည့်အတွက် အတည်မဖြစ်သေးပါဘူး အယူခံတရားရုံးနှင့် အဆင့်မြင့်တရားရုံးအဆင့်ကျန်နေသေးတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားများ စိတ်အေးအေးထားပေးပါ။ တရားမျှတမှုရရှိသည်အထိ ထိုင်းရှေ့နေများကောင်စီအဖွဲ့က အဆင့်မြင့် တရားရုံးအထိ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပေးသွားမယ်။ လာမည့် ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့ ၂၀၁၅ခုနှစ်မှာလည်း ထိုင်းရှေ့နေများကောင်စီအဖွဲ့မှ မြန်မာသံအမတ်နှင့် တရားခံမြန်မာလူငယ် ၂ဦးတို့၏မိသာစုဝင်တွေကို ခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီး အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးသွားမယ်လို့ ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
https://m.facebook.com/mtftv ကိုနှိပ်ပြီး Like ပေးပါ
Credit to MTF Channel
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Tuesday, December 29, 2015 Android, AndroidRoot No comments
KINGO ROOT v2.6 Cracked APK KINGO ROOT v2.6 Cracked APK ****************************** KINGO ROOT for Windows KINGO ROOT for Windows
Adobe Flash Player 20.0.0.267 Offline Installer Latest Version
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Tuesday, December 29, 2015 Adobe, PCPlayer No comments
Adobe Flash Player နောက်ဆုံးထွက် Update လေးပါ..။ကွန်ပျူတာ သုံးနေရင် ဒီ Flash Player လေး ကလဲ မရှိမဖြစ်ပါပဲ..။ Webpage ကြည့်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်Onlineကနေ Flash Song တွေနားထောင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒါလေးက လိုအပ်လာပါပြီ..။ ကျွန်တော်တို့ Browser တွေအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Adobe Flash Player ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ လိုအပ်တဲ့သူများကတော့ အောက်ကလင့်ကနေ ဒေါင်းယူလိုက်ပါဗျာ..။
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Tuesday, December 29, 2015 PCDownloader No comments
Wondershare AllMyTube 4.8.0.5 နောက်ဆုံးထွက် Update လေးပါ..။ အင်တာနက်ပေါ်မှ YouTube အပါအဝင် ဗီဒီယို၊ရုပ်ရှင်များကို တိုက်ရိုက် Search, Download, Convert ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲ ကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ YouTube, Google Videos, VEVO, Facebook, Dailymotion, AOL, Metacafe, MegaVideo, Vimeo, Break. BlipTV, Veoh, VideoBash, LiveLeak, MyVideo, FunnyOrDie, Nico Video, etc. အစရှိသည်တို့ကို videos တိုက်ရိုက် ဒေါင်းလုဒ်ချနိုင်သည့်အပြင် video websites မှ ဇာတ်ကားများကိုလည်း download ပြီးတာနဲ့ လိုချင်တဲ့ convert ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ URL ကိုယူပြီး Copy and Paste ထည့်ပေးရုံနှင့်လည်းအလိုရှိရာ video ကို download ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 33.26 MB ရှိပြီး Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10 (32-bit or 64-bit) အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Full Version သုံးရအောင် Serial ဖိုင်ထည့်ပေး ထားပါတယ်။ အသုံးပြုလိုတဲ့ မိတ်ဆွေများအောက်မှာ ဒေါင်းလုဒ် ရယူနိုင်ပါပြီ။
True Smart 3.5 ဖုန်းတွေအတွက် unlock လုပ်ချင်ရင် အောက်မှာဒေါင်းပါ
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Tuesday, December 29, 2015 TrueSmartAndroid No comments
true smart 3.5 အတွက် ဒီမှာသွားဒေါင်းပါhttps://www.facebook.com/781279358628887/videos/vb.781279358628887/846489528774536/?type=2&theater
Global Computer Services & Net Games
True Smart 3.5 ဖုန်းတွေအတွက် unlock လုပ်ချင်ရင် အောက်မှာဒေါင်းပါ ။ လုပ်ပုံလုပ်နည်းကတော့ video မှာကြည့်ပါ။ ဖိုင်ဒေါင်းလော့လင့် ------
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Tuesday, December 29, 2015 AISLavafirmware, Android2comments
Iris Lava 360 အတွက် unlock ဖိုင်လေးပါ flash tool လေးနဲ့ကစ်လိုက်ရုံပဲ ရှာနေတာကြာပြီ အခုမှပဲရတော့တယ်။ အောက်ကလင့်မှာဒေါင်းကျ အမျိုးတွေရေ
download >>>>> https://my.pcloud.com/publink/show?code=K4crtalK
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Monday, December 28, 2015 Androidlenovo, LenovoRoot No comments
♪ Android OS 5.1 အထိ Click တစ်ချက်ထဲနဲ့ Root ပေါက်တဲ့ - SRS One Click Root Tool v5.1 (PC) ♫
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Monday, December 28, 2015 Android, AndroidApplication, AndroidRoot No comments
အခုတင်ပေးလိုက်တာကလည်း ဖုန်း Service သမားများနဲ့ ကိုယ်တိုင်ဝါသနာပါပြီး ဖုန်းကလိသူများအတွက် အသုံးတည့်ပေးမယ့် One Click Root Tool လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Android OS 5.1 အထိကို လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာ Root ဖောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Huawei နဲ့ တရုပ်ဟန်းဆက်တော်တော်များများကို အဓိက Root ဖောက်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ကွန်ပြူတာနဲ့ဖုန်းဖောက်ပေးရမယ့် Root Tools ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Root Tool ဆိုတာကတော့ မိမိမှာ မျိုးစုံရှိလေအဆင်ပြေလေပါပဲ။ တစ်ခုနဲ့ Root မပေါက်ရင် နောက်ထပ် Tool တစ်ခုကိုအသုံးပြုနိုင်တာကြောင့် ယခု SRS One Click Root Tool လေးကိုလည်းဆောင်ထားကြပါဦး ဗျာ။